Blog — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
"Trip rakanyorwa bhuku Ndinofunga wose wechiduku anofanira kuverenga. chido chake Jesu chizvarwa ichi kunouya kuburikidza noruzha uye zvakajeka papeji ose. Handikwanisi kumirira kuona matambudziko mashoko aya ane pamusoro chizvarwa kuti nzara chinangwa "-. Lecrae, Grammy awarding- kuhwina Artist @lecrae "Simuka chinhu tisaone bhuku kuti inobudisa mwoyo netsika dzedu. Pandakangopedza akakanhonga ndaisakwanisa akaiisa pasi. Trip nezvimhingaidzo kuti REAL, uye anoratidza iwe sei kurarama upenyu hwako chive akura munyika nhasi. iverengwe Great "-. Sam I, NFL linebacker, ruyamuro @thesamacho "Trip akanyora bhuku ndinoda ndingadai waverenga pandaiva muduku. ake chido, njere, uye chido kupikisa chizvarwa chevechiduku testamendi kuti basa kuita kwaMwari kuburikidza Trip uye basa anogona kuita kubudikidza nesu tose. "- Kirk Franklin, Grammy mubayiro- kuhwina multi-Platinum kurekodha Artist @kirkfranklin "Ndakada kuverenga Rise. Kakawanda mubhuku rino ndakazviwana medi- tating pamusoro mapeji ndaverenga navo. Ndakakurudzirwa, akafuridzirwa, uye akashora yose nzira kuburikidza. Netsika anotitarisira kuti kutambisa nguva asi Mwari ...
idzva rinonzi Trip kuti, simuka, zvino kubva! Verenga John Piper kuti okutanga ebhuku pazasi. Unogona kwerubwinyo rwakagara rwuripo-kuitira bhuku uye kuziva zvakawanda pana Risebook.tv Chimwe chikuru zvinhu Ndinofarira Trip Lee uye bhuku rake, simuka, ndiye interplay rwokukudza uye nemusoro. Chinangwa panguva kushanda mune American mutsika kwakakurumbira. Cool ndiko ubiquitous. Sezvo Mack Stiles inoti, Most vaKristu munyika vanofanira kutya vanomutswa chibhakera; VokuAmerica itya vanomutswa tsiye. Zvinoreva hatizi inotonhora. haishandi. Asi chinangwa panguva nekukudza hariwanikwi. Kuremekedza anonzwa akwegura. It anonzwa unexciting. Hakusi zvichitonhorera. Asi munhu wose anoziva, zvakadzama pasi, kuti kana kumupfugamira anoenda, vose upenyu hwevanhu anova siyana zvinoratidza. onda. Glib. sina kudzika. chikweshe. Empty. Pakupedzisira, zvisingareve chinhu. Takasikwa mamwe. "Cool ndiko chinji, uye hatigoni kurarama nokuti "kureva mashoko Trip Lee. chaizvoizvo. Kuedza kurarama chete dzaitonhorera, chete kuti akakodzera, yakaderera. Uye izwi Trip Lee rinodaidzira panze, simuka! Pane kudaro zvakawanda kuona, kuziva, kuda, kunakidzwa. Pane chaizvoizvo zviri zvikuru havagoni kuderedzwa kuti mafaro. Mashoko "mafaro" "kwebhosvo" "bhora" "bato" kuridza one ...
Hey vakomana! bhuku rangu Rise anosunungura musi waJanuary 27 (vhiki rinouya!) uye ini rubatsiro rwenyu. Tiri kutsvaka vanhu vanogona kubatsira kuva chikamu Street Team uye kutibatsira vachiparadzira shoko pamusoro bhuku paIndaneti uye avo evanhu vezvenhau. Unogona tarisa zvakawanda pamusoro bhuku pa http:://RiseBook.tv munamato wangu kuti Mwari achatora bhuku rino uye kushandisa mashoko aro kupikisa chizvarwa chedu kuti simuka kurarama. Uye unogona kutibatsira kuparadzira mashoko kuti kusaina kuva chikamu yedu Street Team kuti bhuku. Heano mazano zvichakanganisa kushanda ... 1 - Shandisa HERE. Ngatizive zvakawanda pamusoro pako, nei uchida kuva chikamu chikwata, uye kugoverana iwe evanhu vezvenhau nevamwe Links paIndaneti nesu. muparidzi wangu ichadzokorora application uye kana vakasarudzwa ... 2 - Kuverenga pachine kopi bhuku. Ivo achakumutsirai PDF bhuku kuverenga. 3 - Join voga Facebook Group. Imi kukokwa abatane yepachivande Facebook Group kubva muparidzi wangu. There, uchaita kuwana savi pamusoro tigutsikane zvikuru kuudza shamwari dzako. Pane...
Ndairidza varsity Basketball chesekondari. Ndicho mutsara wechokwadi zvachose (kana imi kundimanikidza kutsanangura shoko rei). Ndakapinda mumwe chikoro chiduku voga, uye kana uri mukuru unofanira ruvara pamusoro varsity chikwata. Ndinoda nyama yemhuka Basketball, asi ini ndiri mugove nani pane kuona pane kutamba nayo. Ndinogona kukurovai vatambi uye zhamba "Akatsuki!"Panguva referees nomwoyo-nyeredzi unyanzvi. Asi sokuziva zvazvinoita. chikoro changu vakanga mutemo uyu chinoshamisa pamusoro chaizvoizvo vachiridza zvemitambo kuti kudzidza, Zvisinei, saka ndaifanira zvienderane uye ugoisa musoro wangu mukunyadziswa ose Chishanu manheru. The mikoko zvakanga nguva dzose dzizere kumusha mitambo. vabereki rinotsamwa uye vadzidzi-vazhinji vavo shamwari mine- akaoneka kutsigira chikwata. Zvinosuruvarisa, zvimwe akaita se yakawanda musiyano pakati mutambo sezvandaiita. Ndingade kuringa mukati bleachers nguva nenguva, achishamisika kuti vanhu vose vakanga vachifunga, kunyanya baba vangu. Ndinofunga akaona kuti tose takanga chete ikoko kuti arinde, asi ini zvakaitika kuti chigaro nani. The chete nguva chaizvoizvo Ndakaita izvozvo pauriri waiva ...
Ndaiva nemakore gumi namashanu okuberekwa uye upenyu hwangu hwakanga ndatendeuka mukati panze. zita rangu uye chitarisiko haana kushanduka, asi zvose pamusoro pangu wakange. Ndaiva yakasiyana zvachose munhu kupfuura ndakanga ndiri gore kana maviri asati. Handisi kureva apo vanhu kuenda kukoreji uye kusikazve pachavo pamwe nicknames itsva uye unhu hwakafanana; Ndinoreva chinhu chinokosha akanga aenda pasi mukati kwandiri. Ndakanga kuva muKristu. Ndainzwa itsva. Ndainzwa mupenyu. Ndakanzwa zvakanaka kuti ndaifanira kuzivisa kuti munhu aizoteerera, kunyanya shamwari yangu yepedyo uye mhuri. Munhu wese akagamuchira zvakasiyana kuchinja mandiri-vamwe nomufaro, vamwe kurwisa-asi chete kukurukura nguva dzose akamira kwandiri. Ndakanga ndichitaura munhu akura wandakanga vanoremekedzwa zvikuru, chaizvo kutsanangura mutambo wangu hurongwa zvokukudza Mwari pamwe mararamiro angu, zvakananga kwangu zvepabonde kuchena. Ndakaedza kudzikama nezvazvo, asi zvakanga nguva dzose zvakaoma kubata kufara kwangu. Sezvo mashoko leapt kubva rurimi rwangu pagungano tyisa kumhanya, Ndine pakuti akanga asina sezvo kufara sezvo ndakanga. Akanga achiedza kuteerera chinyararire, asi ake kwechiso chako vakateerera asati ...
Hedzinoi dzose acho nokuda Trip kuti cheshanu Studio Album Rise. Tinya pa rwiyo zita kuona Lyrics nechimwe njanji. Nakidzwa uye kuudzawo shamwari! 1. simuka 2. Lights On 3. Shweet 4. Manolo Ft. Lecrae 5. Hauzive 6. All Simuka Up (inoridzwa kwenguva) 7. All Simuka Up 8. Beautiful Life 2 (Mine) 9. Insomniac Ft. Andy Mineo 10. chinhu New 11. Razaro Ft. This'l 12. All Love My Ft. Natalie Lauren 13. Ndiri Gone 14. Sweet Victory Ft. Dmitri McDowell uye Leah Smith
haka: (Dmitri) Ndinonzwa minzwa apo korona yangu yakanga Ndichange simba asi ndiri mupenyu Kubva guruva kusvikira mambakwedza into Ndichange kupona chikonzero ndakawana Sweet Victory Hapana anogona kutora kubva kwandiri Sweet kukunda Nokuti ndine, chinonhuhwira kukunda into Verse 1: Munoona ini achikamhina , Ndinoziva munoona ini achikamhina Haukwanise kukuudza pamusoro maCD izvi, asi BRO ndiri ibvi yakadzika mairi Ndiri wading muutera hwangu, Iye akandiita nemataundi ndingada nhema kuburikidza mazino angu kutaura handina yokuchiramba Sezvandakaona ini kunyora mitsetse iyi Ndiri pedyo misodzi muviri wangu asina kushanda zvakanaka kwemakore manomwe Naizvozvo vakandishaiwa pamwe kuti tirambe " chirebvu rwenyu edza kunyemwerera "Bruh ndine maviri nezvitanhatu, Ndinofanira nani kuburikidza maira Chengeta anecdotes zvenyu zvose uye akanaka prices Ndichaenda zvakaitika clichés nokuti tariro yechokwadi, iye zvakare dope Hook Post Hook: Tositi kuna Mambo, tinoonga kuti siringi Achinzwa zvakanaka isu kweYangon 'kuti kusvika kumugumo Sweet kukunda Munonzwa ini, holla kana uchinzwa ini Isu tichiri achimhanya kunyange zvazvo isu achikamhina Sweet kukunda Chikonzero isu kuhwina, hongu munoziva isu kuhwina Kunyange zvazvo isu winded isu ...
ndima 1: Ndechimwe chinhu mupfungwa dzangu kuita uine nguva? Soapbox swag, Ini zvanyanyisa pamusoro payo Ini ndanga namaketani izvi uye ndine ndaneta nazvo (Car ruzha) Ndinoziva paunonzwa matai izvi vachidzipukuta Screeching nomugwagwa, gotta ibva Ini kuronga Nditize, Ndinofunga ichi zuva 'Nokuti ndiri ari muusungwa sei kutendeseka nhema dzake akaedza kusunungura ini asi haana kukwanisa Get in yakakwirira, tora neb yakakwirira, kuwana in yakakwirira Novacane mumuviri wangu, kwete handisi kunzwa nhema Vanoti Ndine wakawanda uye vanogona kushora Asi ndiri kunamatira richipararira, havagoni kumirira aurayiwe Usati vanogomera, mundoudza vanhu Ndiri akaendepiko ndiri kutaura Kumbonetswa ndichirasikirwa Lucifer, munoziva iye chakaipa Ndinoziva imi haisi wakabvunzwa aputse pafoni Zvakaipa kana ini aputse rwiyo? haka: Ndinonzwa zvauri achiti, asi handitendi imi nokuti iwe chete nhema, uye ini havadi iwe Ndine Ishe idzva, Ndinoziva kuti handina kukuona Asi ndinoona zvakanaka kubudikidza newe, saka ini gotta kuzokusiyai (Dzokorora 2x) ndima 2: Kangani ini gotta Taurira ...
Intro: (Natalie) Ini kukuona kuona here nezvaunoona? Ndiri kumboremekedza? tsime, sorta kinda zvichida Ko chaunacho mupfungwa? Chiso chako anotarira vanoshamwaridzana ndinoona imi dzose nguva Uye ndinogona kuchengeta iwe manheru ano kambani Iwe hauna gotta kuudza munhu Ko munhu mumwe kumativi uchiona Hongu taurai shoko uye iwe kuiona Right pano, izvozvi Verse 1: Jay akanga kusurukirwa Iye kutsvaka rudo pamambure Murume ane zvinodiwa, chii uchitarisira? Akatarisa kuburikidza mapeji zvavo zvose Zvino akawana murume wake akarasikirwa mweya wake Nokuti zvakanga rudo pakutanga kuona apo vakasangana mwoyo wake kurova zvakaoma Akanga kinda chiedza ganda, meso akafanana aifarira navo Hakugoni navo manzwiro pavakarova izvi zvakaoma Zviri refu daro, nokudaro naye paIndaneti dzose nguva Ari kubasa asi musikana uyu zviri mupfungwa dzake dzose nguva Haangagoni kumirira kumuona, iye akava navo banging zvinhu vakati pamwe chete iye haana kumboita iye gotta muripo pamwe Visa homies vake kumunyevera "kutonhora kuti mukadzi haagoni kupedza iwe" Asi iye ari mutambo rudo iye regai ...
ndima 1: Mukomana Ini hopped panze muguva zvakanaka mangwanani Ini ndanga varara yakarebesa Ndiri yawning Munhu wose kutaura kuedza kundiona, kushamisika Kufanana sei kufema? Akanga tsoka matanhatu Boy zvakadzama zvaunofanira achiti? Kusimudzira vhara muromo wako varume Dead haungaishaisi holla, zvauri kutaura Kumbonetswa? 'Achaita kamwe nepasuo kuti hazvina kufamba panze asi regai nditore iwe shure munguva pabhokisi yangu ikozvino Ooh kuziva iwe azvinhuwidze mudenga Nokuti ndiri ari muguva kuresa Ndinopika Vanhu kuchema ndiri kurasikirwa, obituary zvakanyorwa My chiso zvacheneruka, havagoni kutaurira mukomana wako kuda amuka Close uchanja, dana muparidzi, iye aenda saka Zviri pamusoro havagoni munhu akaitema, uti refu saka Asi chigumbu, usati kuchema uye kumhanya panze ndakanzwa munhu kuuya, vachiti chinhu zhowezhowe, "huya kunze" Pre-Hook: Hopped akabuda muguva, mangwanani akanaka ndakarohwa varara yakarebesa Ndiri yawning Vakandivinga akavigwa suit dema, dema chisungo Ndine mupenyu uye ini ndapepuka achitarisa achibhururuka Naizvozvo kubvira zvino Hook: Kubvira zvino mungandizivisa Razaro kudana kubva zvino mungandizivisa kudana Razaro From ...
Intro / yokuenzanisira: Mira, kusimudzira Regai nditore mumwe (Dzokorora 4X) ndima: Mukomana munoziva ndakatenga kwavari J raMwari, achazunungusa navo Zvaainge riri craze tsoka dzangu, wangu muwadhiropu haasi kupedza Munoziva I akadzitora 5 uye ndinongoda akadzitora 12 wacho Asi muchizviziva 1 I waida iri pasero Saka vakaroorana vakawanda the clicks panzvimbo, kusvikira ndiri kunzwa zvakanaka Bruh I gotta kuchengeta sneaker yangu yemhuka zvakasimba Kana munhu wose akadzitora homie kuti haana chii Ndinofarira Zvino munhu wose Wanna kufanana neni panzvimbo Mike yangu muropa hakusi vakadzi kana booze Sneakerheads kusazivikanwa, Ndiri kuvava vamwe shangu Zviisei pakadhi wangu, Handina chinhu kurasikirwa Ndinombonetseka chii I Wanna kuratidza Nokuti ini wan't chinhu chitsva Chii ndakatenga hazvizorevi kuita Ndinofunga ndine vamwe kinda besa Nokuti ndine muropa kuti itsva Yakasvika ini kufanana Outro / mharidzo: Hongu izvozvo ini akamuka akafanana Simudza, kusimudzira Regai nditore mumwe (Dzokorora 4X)
ndima 1: Ndiri kuenda nhasi Izvi hwangu chete akapfura upenyu wangu rekugadzirisa nhasi Hongu mwoyo wangu rurege Kana ndiri kubuda manheru ano ndiri kubuda pamusoro ndinoripa upenyu zvose izvi hazvisi zvose Ndine Yessir zvino chimbomirai zvishoma bruh I ona y'all ichazununguswa nemaoko enyu yakakwirira Waiting kuti urove kuzobvisa, 808'S pamusoro standby Kana ndiri kufema bangers ndinoti mashoko ndimire The pasi kweYangon kuzungura apo kuti urove inodonha, mhoromhokwa Ndapota regai kure leash wangu kuchinzwa, Ndinonzwa sokuti, Ndiri kunzwa zvakare zvakanaka Kufanana ndiri mhuka Kufanana gorira uyo chechokwadi Saka ndiri kuenda mberi uye Hood pamusoro Ndinenge achizorora pandinenge akaendepiko Simuka gaya ndiko ndiri Bruh ndosaka ini akanyora rwiyo manheru ndava kure akaita upenyu hwangu span chete rinovapo usiku hwose Kana ndisingati padzinomuka mangwanani, bruh ndiri kweYangon kuva hongu Kanda yambiro nemhepo Regai kuenda isu Kumbonetswa kuenda No kuderera, isu kweYangon kuhwina No kuderera, tinomuziva Kuzvikudza Pre-haka: Manheru ano Ndichaenda pamutanhiko zvose kutevera Uye kurarama kufanana hwangu muupenyu ...
Intro: Oh, Ndinokuda, hongu Like hapana zvimwe, hongu Pandinoona manyemwerera iwe chipenye kungofanana muzhizha, hongu Verse 1: Munoziva kuti kunzwa kana mashoko vanotadza Zvakaoma nokududza zvandiri Wanna kuudza To Mini vangu, murume wangu muduku Iva kutaura hurukuro mwana, Handizivi zvauri kutaura Asi zviri mimhanzi munzeve dzangu kunyange Boom bap kuti baba vako kana ndiri pedyo kunyange Amai akaisa imi mavari polos uye skinnies Curly nokoko dzomusango, iwe uve flyer kupfuura Leer kunyange Unofanira kuti yakavhenganiswa mbudzana swag pavari Achitarisa yakafanana amai vako nababa vako pamusoro pavo Straight kunze mudumbu iwe akanga chaiyo yakachena ndaichema saka zvakaoma kusvikira ini handina misodzi vakasiya Kubvira ipapo iwe chengeta kunyemwerera chiso changu Wrestling nokutamba, mhuka panzvimbo Tarisai Ndinoziva une zita rangu Asi ndinoda kupfeka mupenyu wake mukurumbira, Ndinokudai Hook: Oh, Ndinokudai Kufanana hapana rimwe Pandinoona manyemwerera iwe chipenye sezvinoitwa muzhizha chiratidzo wangu haagoni kuva zvakajeka kwete kwete kwete Nokuti uri wakanaka, hazvishamisi ndinokudai Handikwanisi ...
chiratidza zvizhinji: Kana isu tose inokwira, o into o into (dzokorora) ndima 1: Ndinoziva ndoregerei kuti kubata Mik BRO Asi nebasa iri chinhu kuti ini aizorwira ndiri yezvirwere nechinyoreso ichi uye Pedhi Kuziva Ini aipedze wokupedzisira, kuti haasi nei ndinonyora thoughLet kumashure munguva '04 ndakasangana 116, nokukurumidza ndakanga mungarava Fast mberi kwemakore mana, isu pamusoro rwavakaita Uye isu haasi kuziva chaizvo zvaakanga chitoro Asi ikozvino pano tiri makore gumi gare gare, Rwako akamuka mukuru Bonds pedyo, ndinoiitawo zviri zvakawanda vanovenga Vachiti isu chete kuzviitira mukanyiwa, asi havanganamatirani isu kuputsa 'Bvisai Ishe watinoshumira aibuda iye saka nyasha Zvino kana ivo vanondibvunza kuti nei ndichiita izvozvo ndinoti kwavari zviri kurira sangano Hongu ndiri kutaura nokuda kwangu unashamed vashandi Kuti haangatongovi kubata padanho asi vari kufamba hutsva ake Simuka Pre Hook: Kana isu simukai zvose upThat yaizova zvandaida Tose tinofanira kusimuka Uye kupa noukama Haiwa mambo nokuti zvakanaka Oh hongu, o into Oh hongu,...
Intro / yokuenzanisira: Vamwe mazuva ndinonzwa saka pedyo Zvino mamwe mazuva zvinoita saka kure Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera kutevera Uye haana kudzoka isina, o Hareruya ari kumusoro rumbidzo Ndichaipa kwamuri nomufaro mazuva angu ose Ini chete tariro kuti zvose hwangu upenyu rinopa kuti ndinoreva shoko ose, Ooh Kunyange zvakaipa ini naJesu, Oh Jesu, My Jesu, ndosaka ndinokudai saka Verse 1: Mukomana Ndinonzwa sokuti ndiri Revhiatani Kupererwa kuti sarudzo yangu yakasimba, Obama Biden (zvitore?) Everyday Ndiri homiciding Killing kuti akaipa mukati mangu, dzimwe nguva zviri traumatizing (hazvisiri?) Asi BRO kuti hazvishamisi kuti ndinofara kana ini munamatire ndiri chivimbiso akatasva shoko rake Ndinovimbisa Ini ndanga dai izvozvo kana Handisi rinogara Ndakaziviswa akafumurwa, asi ndiri maari fanano: Ndiri yakavanda sokuti ndine buri rimwe Ivo vachikanda mumvuri, asi ndiri achinyemwerera chikonzero ndinoziva Mwanakomana sokuti ndiri kurota chete yakazaruka maziso, pfungwa dzangu akayangarara Gliding kubudikidza denga rinobuda, gore 9 ndicho Ocean wangu Swimming pakuti ozone rukoko rukoko Hey Ndiri soaking Asi abatidza kuti moto pasi wangu shure ndiri kusvuta handigoni ...
haka: I kuzviitira dzoro kukwira akamuka kuti ammo akakiyiwa akatakudza Handina kutaura pasina burner Flip peji, Ndichaenda putika naro Got imwe imba yemapuranga Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Dzokorora 2x) ndima 1 (rwendo): Kuedza kuvaudza vakomana handina kusiya Danga oga Nokuti ndinoramba mumwe mumotokari yangu uye kumba Ivo dzakasiyana siyana Ndine vaviri, asi vanoita zvimwechete Double mucheto, kaviri bharero, Bang Bang Ndiri pano akatarisana makava, I haabvi mupfungwa dzangu Ivo kuuya mweya wangu, saka zviri Kumbonetswa iyoyo Vachidzishandisa nhema ivo kundiuraya, kana musingatendi ini handina basa, Handina hanya, Handigoni zvidzore Ndiri flipping peji, Ndiri rukungiso-kufara imwe vhidhiyo uye geji nekudzvanya naro, kurovera pavaipfuura Hit iwe nechokwadi, aro mashoko ose Akacheka neni zvakadzama ndine Diving, Ndiri mitambo yomumvura muna Pandinenge kuchovha ndine kuti moto moto, Ndiri mupenyu zvakare Hook Verse 2 (Lecrae): Manolo Manolo, Ndiri kubva pano kuenda mabha- shamwari dzangu vanofunga Ini achirasa, amai vangu vanofunga Ndiri Jay ndinochengeta shooter rangu pedyo zvazvo, munoziva kuti zvizere ...
haka: Get navo maoko mudenga Ita zvishoma ruzha iri rinomirira kana iwe ipapo Kuzvikudza pamusoro Godman kana iwe angatsunga, chete kana iwe angatsunga Kuti vaizoenda shweet Zvakadini kana paunenge pemapani hazvina 'Kumbonetswa mbatya pamwe Tags? Kuti vaizoenda shweet Zvakadini kana paunenge pemapani zvakanga Kumbonetswa iye ndiani wekutanga newekupedzisira? Kuti vaizoenda shweet Post Hook: Ini vakavanzwa vachitaura akafanana ivo inopisa murume Mumwe akadzitora gassed vakakwira, nezuva iroro octane Tarisai ndinovenga kuvaudza ivo haasi nani nani kuwana amburera, Mwari anotonga Verse 1: Ngatidzokerei munguva mukupera eighties D muguta ruchandifambisa pasi, ndipo akandiita Pandinofamba shure ikoko, Ini haisi Vaca-ku- (pazororo) Sokuti ndiri pamba, kufunga kugara, Ini haisi kugara kunyange Ooh kare kare Lone nyeredzi mamiriro akatunhidzwa, Ndingapa sei kukanganwika Asi handisi mifananidzo inokukurudzira kubva yebhuruu Zviri kubhururuka sei yakanyatsobatana neni, Ini haisi kutaura Kumbonetswa ari shangu, Nhungirwa ndakawana yakawanda matambudziko asi ndiri ngaatarire, Ndicho shweet ndinoziva Mwari wangu achaita kurikanda navo mudziva, izvi shweet vangani nguva Ini gotta ndinokuudzai ...
Intro / yokuenzanisira Oh o, chiedza Hatizivi patakagara kuenda (dzokorora) ndima 1: Tarisa zviri zvose rima, dema zvose zvose Kufanana miriyoni murume kutevedzana, asi ndiri kutaura Kumbonetswa zvose Dark mwoyo, rima mweya pfungwa Dark kunyora rima Rwako Ndingaita kuwana chiedza shoma kunyange? Ndechokuti chinhu ndinogona murwire? Hey isu saka mapofu hatizivi On kuti mugwagwa tiende Enda akurumidze mberi, kubhururuka asi isu pasi Asi hatizivi chete zvaanenge apinda chitoro, haachipo anowira pamusoro okie doke Kwete, anogona kutipa pamberi zvinhu isu kumboona pamberi 'Kusvikira chiedza kusvika ichipenya, hatizivi patakagara kuenda Asi hachisi hapana Google Map upenyu, uye akaita maraiti dzedu akavhuniwa Zvinoratidza: isu kuvheneka, vakapfuura vamwe pfuma ndiyo yendarama Nokuti vamwe nickel uye mhangura, kuedza kuwana kubwinya izvo zvikabiwa Uye vachikohwa chii isu vachidyara Hey tose takawana zviroto, ichi ndowangu Ndiri ndichinyengetera kuti ndichava pafiripi kuti chinja uye chipenye, vana vari mapofu Tinoziva imi kuiona, Ishe tinoziva imi kuiona chete unogona kutora isu yepamusorosoro, imi mutyairi Zviedza ndapota Hook We ...
haka: Nhasi Ndiyo zuva apo isu tose simuka Mbambo wangu aenda saka tarisai ndiuye mupenyu Together isu urwe uchipfuta nhema zvino kuti ini ndakawana mapapiro angu ndakagadzirira kuenda Simuka, isu tose simuka Oh o o Tese simukai Oh o o Vanhasi zuva Rise Verse 1: Kusimudzira Ndiri shure kuzvirumbidza pamusoro pamakwara izvi zvakafanana ndiri kupenga panguva no, kuti kutsigira slap mics chiregera pfungwa chokwadi handina kumbobva ndiri hype Teerera zvakanaka iwe hauna gotta uchindikumbira kaviri Ndiri pano, Ndiri pano kuti kudada naye akafanana Ndiri kuzivikanwa Nepo vabereki gwiridza I'ma kuenda nokuti Mwari wangu haasi asina ngano, 'Kukonzera iye chaiye, Iye chaiye Zvino nyaya paruoko Ndinoziva akagadzira, iye kupfuura vezvikepe vanobhururuka mumakore iye rakagadzirwa ake Ndiri kunyora kukutaurira upenyu huno maoko ndiyo nokupenya mugango sei I'ma pamudyandigere apo tinoda cryer kutiudza kuti simuka umire? Ongorora vad anoronga dude My, kuti guva haisi musha wako Nokuti imi makanga pevhu nzira yakarebesa Six zvakadzama ane musi ibwe renyu All vanoti,...
Yakabudiswa neZvapupu: Gawvi Additional Vocals kubudikidza: J. Paul Artwork kubudikidza: Alex Medina Mixed uye nyanzvi ne: Jacob "Biz" Morris Verse 1: Ko munhu Wanna kunzwa marwadzo edu Ndiko sei ndiri kunzwa kana ndiri flipping kuburikidza navo Twitter mashoko, zvose ndinonzwa zviri mvura Ivo achindiudza kuwana pamusoro payo akwegura zvinhu havapo pasisina Asi regai echokwadi pandinofunga idzi mumigwagwa Saka zvechokwadi kana ndava kuda coulda kunge ini Hook: Man ndinogona kukuudzai sei ndiri kunzwa zvakanaka zvino Ah ivo Wanna vanoziva sei ndiri kunzwa zvakanaka zvino ndava kuda coulda ini ndanga ndava kuda coulda ini ndanga Tose vakaitwa nomufananidzo waMwari munoziva All hwedu basa, chiratidzo wedu akachimedura Tinonzwa marwadzo chikonzero isu pano pamberi ndiani mhosva handizivi Asi coulda kunge ini ndava kuda coulda ini ndanga Verse 2: Handina kuziva Mike Brown Handina kuziva Trayvon ndaisaziva Sean Bell Asi ndinoziva ivo vaenda Handina kuziva Oscar Grant kana Tamir Rice ndaisaziva Eric Garner Asi ndinoziva ivo upenyu munokosha kupfuura ivo ...
moyo wangu rinorema. Ndinoziva Mwari akanaka, uye kuti Iye kudzora, asi moyo wangu rinorema. Last vhiki pashure nezvakaitika Ferguson (uye mhinduro pamusoro evanhu vezvenhau), Ini vainzwa kunyora rwiyo. Chinangwa changu chaiva haana kuita chero huru mashoko kana kuzivisa, asi kuratidza nenzira zvose ndisanzwa. Saka ndakatanga kunyora, uye izvi ndizvo vakabuda. NaA dzichidairira mupfungwa dzangu yakanga: "Zvinogona kunge ini ndaivapo." Ndaiva munhu wose mumhanyi wakagadzirira sei vaKristu vanofanira kupindura munguva yakaita izvi, asi pashure mashoko pamusoro Eric Garner zuro, Ndakasarudza kumirira uye pambiru kuti gare gare. For ikozvino, Ndinoda kutaura kuti ndine rinorema mwoyo. Ndiri izvozvi vasingangofariri nharo kana nharo. Ini chete vanoda rusununguko kuratidza kundikuvadza. Ndiri vachikuvadza nekuti kuti Eric Garner vhidhiyo ndichiiparadza kurinda. Apo mudzimai wangu uye ini pakutanga akaiona ago, isu tose mhere. Upenyu chipo chakanaka, uye Zvinovhundutsa kutarisa kuti upenyu kusiya muviri munhu wacho - kunyanya kana atora nedzimwe varume. ndaifunga, "Zvirokwazvo vanhu havagoni ...
bhuku rangu idzva, simuka, anobuda January yechi27! Zvichava kuwanikwa pose dzinotengeswa mabhuku. Unogona kwerubwinyo rwakagara rwuripo-kuigadzira ikozvino tishanyire bhuku Website pana Risebook.tv. Ndinonamata Jehovha achashandisa nayo kukurudzira chizvarwa changu kuti simuka kurarama. Watch turera kumusoro uye verenga tsanangudzo pfupi bhuku pazasi: Society rinoti wechiduku inguva kumbotamba yokuzviratidza, asi Trip Lee anoti Mwari akatidana wose kumuka kubva dzinofarira kutsumaira, pamusoro tarisiro shoma, uye kurarama nokuda Mambo amuka. Nyika rinotitaurira kuti makore edu okutanga zvinofanira nemari yaakapiwa kunakidzwa pane vakazvipira vavariro. Tinoudzwa kuti basa uye kuzvipira ndivo mitoro anofanira kubvisa kwenguva refu sezvinobvira. uye saka, vakawanda vedu vanopedza vechidiki yedu anosuruvarisa mamiriro wekutsumwaira-vakarara upenyu kusvikira tava kumanikidzwa kusimuka. Chinetso ndechokuti upenyu vakatotanga. Zviri kuitika iye zvino. Uye Mwari akakudanirai kurarama nayo. Mubhuku rino simba, Trip Lee anoti inguva muka uye SIMUKAI, kurarama nzira takasikwa kuti tirarame. Young kana akwegura, tanga vakadanwa kurarama iye. Pari zvino. vatendi Young vanotarisana ...
Ko vakundi somunhu? Vari varefu kana pfupi? Black kana chena? Strong kana simba? Ndinofunga zvinoe- chii isu airevei "mukundi." Ndakanga vakanwa kupinda nyaya mumwe mukundi mwedzi uku kare somunhu kuverenga yakareba, asi vave nechekuita Biography waMikaeri Jordan. Nhoroondo hwakadzama ichindiudza nei Kuramba vanhu vakawanda naye muganhu kunamata gamba. Zvinhu zvakawanda zvinogona kutaurwa pamusoro "ake airness" asi hapana aigona akambotaura iye asiri mukundi. Aitarisira sezvinoita weNobel asati awana avo vose Championship zvindori, Zvisinei? Sezvaunoverenga bhuku, zvaiita pachena kubva achiri muduku kuti aizova shasha. Kunyange zvakanga hunoshamisa mutambo wake sezvo zvishoma sungano chirongo kana somunhu mudiki varsity Basketball mutambi; ake chesekondari kukura ashingaire chaizvo kana ake mutambo richakunda vapfurwa panguva yake freshman gore pamwe UNC. Pakazosvika nguva ndakasvika muzvitsauko pamusoro Championships ake ave Chicago Bull, pakanga pasina zvinoshamisa. Munyori akaudza nyaya yake nenzira akaita kuti pachena: Jordan akazvarwa kuva mukundi. Uye ndizvo zvatinoziva kwaari: kuhwinha nhanhatu Championship zvindori, MVPs shanu, uye 14 All ...
A nemudzimai ago I akashamisa vanhu vose nokuzivisa hachizi Album itsva, "Simuka." Hamunzwisisi zvakaoma sei zvakanga kunyarara pamberi pangu chitaridzi uye ndakaenda paruzhinji. Album akanga ari mabasa kwenguva inopfuura gore, uye ndakanga ndisingagoni kumirira kuudza munhu wose - kunyanya vaya vakaramba vachibvunza kana ndakanga kudonhedzera chinhu chitsva. Mhinduro saka kure yave Zvinokurudzira chaizvo. Ndine kushamiswa kuti vanhu vakaramba anonditsigira kunyange zvazvo dzandakamboenda runako yakanyarara kuti okupedzisira maviri apfuura. rudo rwenyu uye mufaro kwave chete yakawedzera zvangu. Early Retirement Chimwe mhinduro handina kushamisa kubudikidza chaiva ichi mumwe: "Chimbomira, Ndakafunga iwe pamudyandigere?"Uyu ndiwo mubvunzo kuti anonditevera kumativi somumvuri. Handina akataura nawo kubvunzurudzwa, Tweets, uye Blog mbiru, asi ndinoziva kuti kuchiri kujeka kune vamwe. Regai kuramba kuedza kumisa zvinyorwa kururamisa: Handina basa. mu 2012, Ndakazvizivisa ndingada kuti vave "achipindira kure mumhanzi." Hungu, Ndinoziva kuti zvinoita mudyandigere-ish, asi ini nemaune haana kushandisa shoko kuti. Ndakaramba naro nemaune kujeka nokuti handina 100% chokwadi chii zvingadai kutarisa akafanana. Ndaiziva ...
Need chiyeuchidzo zuva nezuva kuti iwe vakavakwa kuzvikudza? Takaona akaisa pamwe Wallpapers mashomanana foni yako, piritsi, kana Desktop. Kune zvitatu nyore kusarudza pazasi chete nacho Logo. Kune zvakawanda zvichauya papera. Nakidzwa! Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper Download iPhone Wallpaper • Download iPad Wallpaper • Download Desktop Wallpaper
Muupenyu hwangu, Ndava vagura mwaka apo ndanga zvechokwadi chakaita kushanda kunze. Pandaiva kuchikoro Ndaingoda kuva Buff zvakakwana kufadza vasikana (ini vakakundikana). Mumwedzi ndisati muchato wangu Ndaiedza kushanda hanimunu yangu Beach muviri. mazuva aya, Ndiri kungoedza nechokwadi ndinorarama apfuura maviri angu. vavariro vangu vakatsinhanisa mumakore, asi chii haana kuchinjwa sei kuvimbika tiite idzodzo. Zvichida uri muropa uchida kushanda kunze-danidzirai kubva kushamwari dzangu kuposita pics uye mavhidhiyo kurovedzwa kwavo poda rimwe zuva. Asi kana uri wakafanana neni, vavariro dzako kukwira uye pasi sezvinoita mbudzana pamusoro trampoline. Ko kana zvichiita basa rako kunze rwakatora nokusingaperi, Zvisinei? Ungada kuva uchida? Basa rakaoma Mubayiro Panguva Winter yeOlympic mwedzi wokupedzisira ndakanga vachishamiswa sezvo ini ndichizviona mheni nokukurumidza bobsledders uye highflying snowboarders. Ndaiororwa dzavo emitambo kunaka, asi ndakanga akatonyanya mwoyo kana Ndakafunga pamusoro akaranga nokudzidziswa anofanira kutora kuwana ikoko. Panoperera nechimwe chiitiko apo nokukunda Vamhanyi akamira pamusoro Kumukundi wacho ...
Music ari chikamu chikuru muupenyu hwangu saka Ndinogara kufunga kuishandisa zvakanaka. Zvakaoma kwandiri kunakidzwa unyanzvi pasina kuongorora, manotsi, uye achibvunza mibvunzo. Beyoncé ane rudzi vedu ngwariro izvozvi uye ari pachena chimwe dzedu dzinodiwa zvikuru Pop nyeredzi. Mudzimai wokutanga kunyange akati kana iye aigona kuva mumwe munhu, akanga vanoda kuva Beyoncé. Beyoncé ndiye yakakurumbira kupfuura akabvira ambova, saka unogona usambobatidza TV kana kuwana paIndaneti asingaoni chimwe chinhu nezvake, kubva wongororo kwake Album zvitsva mifananidzo yake achifamba nomugwagwa naye mwanasikana. Ndiri chaizvo tarenda rake uye kunofuridzirwa wake nemotokari, asi ndiri uyewo zvakamushamisa zvimwe zvinhu Ndinoona. Beyoncé uye ndine zvinhu zvishoma zvatakafanana. Tiri vaviri kubva Texas, uye vane mijenya dzemhuri muHouston. Tiri vaviri vemifananidzo avo ndakakunda asunungurwa yakakomba nhamba Solo Albums (kunyange iye zvishoma zvikuru kuzivikanwa kupfuura ini). pashure, tiri vaviri vatadzi vanoda nyasha dzaMwari. Uchifunga, kana ndaiva mukana kuzosangana naye izvi mimwe mibvunzo I ungabvunza, vamwe ...
Ndinofarira kukurukura kwaMwari muupenyu hwedu, kunyange kana munhu akasabvumirana neni nezvazvo. Kukurukurirana kunogona kuwana chaicho kuoma chaiyo nokukurumidza zvazvo-kunyanya kana tiri kutaura pamusoro nharo nyaya. Zviri kumbobvira Zvinonakidza kutaurira mumwe munhu kuti unofunga vari zvakaipa. Saka ndinoedza kungwarira namashoko angu, uye kungoti kunongedzera zvinotaurwa naMwari, pane yangu nepfungwa. Kufanana clockwork, Zvisinei, pane imwe nguva pavaikurukura, vachada Mumuvhomorerewo kwehwamanda kadhi: "Asi haasi Bhaibheri hariti kutonga? Imi nyore akapembera pamusoro kuti ndima, hu?"It harumboperi. In Matthew 7 Jesu anoti, "Regai kutonga, kana newewo urege kutongwa. "Kunyange vaya kumbobvira kuverenga Bhaibheri rinogona kutaura chikamu ichi rake mharidzo shoko neshoko. Izvi zvingava zvikuru yaizivikanwa ndima yeBhaibheri muzuva redu. Uye ingava zvikuru kunzwisiswa Kusanzwisisana ndima iyi zvinoreva tikasanzwisisa sei isu vanotofanira kudanana. Saka zvinokosha kuti isu kubvunza mubvunzo: Jesu anorevei kana anotiudza kusatonga? ZvaAri hazvirevi vhiki Last, Ini nomudzimai wangu takapinda wokuroorana wekishopu chechi yedu. Sezvo isu ...
Pose pandinonzwa kuposita mifananidzo mhuri yangu evanhu vezvenhau, mhinduro dziri mafaro nguva dzose. Zvinonyanyozivikanwa, "Mwanakomana wenyu Wakanaka!"Kana kuti" Chii mhuri chakanaka!"Asi mumwe mumwe nevakawanda mhinduro iri, "Ko mukadzi wako chena?"Vanhu vanondibvunza panguva anoratidza dzimwe nguva zvakare. Mhinduro ndeyokuti hungu. Mudzimai wangu kongiri pakati Hungarian, ChiItalian, uye Polish-izvo kuti vanhu vakawanda chaizvo zvinoreva hungu, iye ari chena. Izvi hachibatsiri vamwe, asi zvinotyisa kana kunyange mwoyo vamwe. Handifungi munhu anofanira kushamiswa kana mwoyo vendudzi michato, asi ini ndichiri kuda kutaura pamusoro nei ndakaroorwa kunze kwangu "rudzi. Chisarudzo kuroora mumwe kubva dzinza akasiyana makuriro akanga asiri rokubvisa mumwe kwandiri. Handina kumbobvira akagara pasi uye akanyora akabudisa zvayakanakira nezvayakaipira nyora. Kunyange kana zvandakaita, Chokwadi chokuti mudzimai wangu haasati amboona chiitiko pamusoro "Martin" vaizova with muboka. asi chokwadi, Handina kutambura pamusoro payo kana kutsvaka zano pamusoro kana zvakanga OK. Ndaiva nechokwadi chokuti iye ndiye mukadzi kwandiri kuroorwa, kunyange zvazvo akanga asina vatema. Vamwe aisazombofa funga kuroorazve mumwe akanga asiri chete urudzi ...
Guest pambiru kubva Jessica Barefield Regai kutanga nokupa Disclaimer. Nyaya iyi haisi sei zvakaipa evanhu vezvenhau ndiko. Zvinoshandiswa mwero, nemoyo yakarurama mamiriro, inogona kuva chinhu chakanakisisa chaizvo. Pfungwa ino ndiko kuratidza dzimwe nzira kuti magariro evanhu vezvenhau kunogona kuva musungo wakabata upenyu hwechiKristu uye kukukurudzira kuongorora mwoyo wako kana totaura yako mumagariro vezvenhau zvinodyiwa uye kupindurawo. Ava munzira shanu evanhu vezvenhau kunogona zvokudya zvido zvedu vezvivi. 1. Social Vezvenhau vanogona kutambisa nguva yako Hachizi hatina kumbonzwa, asi zviripo vachidzokorora. Tinoyeuchidzwa muna VaEfeso 5:16-17 kuti mazuva akaipa uye tinofanira kushandisa zvakanaka nguva yakapiwa kwatiri. Chimbofunga kwekanguva chii unogona kuita pane vachiongorora nzvimbo vose. Akamira waari, tinogona kuramba mazita vanhu kunyengeterera pamusoro foni yedu uye kupedza imwe maminitsi iwayo mumunyengetero kuti mhuri yedu uye neshamwari. zvechokwadi, pane imwe nguva kana kuti imwe, tiri tose nemhosva maawa on Facebook pazuva uye haana kuzarura Shoko ...
Kana muri achipfuura nguva yakaoma, vanhu havasi kuziva zvokutaura. Mhedzisiro maturo clichés kana trite kuedza ufare. Ndagara vaiva nechinetso Cliche phrases- nekwaiitwa hazvirevi chinhu munhu achiti kwavari uye regai chaizvoizvo kubatsira munhu achivateerera. One zvinhu zvakafanana, "Chin kumusoro" uye "Zviri unenge zviri nani." Chaizvoizvo? Unoziva sei? Usingaiti shamwari dzako chero nyasha nokuvapa chiedza, fluffy tariro dzisina midzi chinhu. chokwadi chakasimba kuti apo yakadzika marwadzo Hits tinofanira zvizununguke kuraramisa. Paaiita Kumbonetswa yake kenza, Christopher Hitchens vataura kushungurudzwa zvakafanana nevamwe maturo zvirevo tikakandira kumativi. Iye anopedza mapeji mashomanana uchirwisa mumwe wavo mubhuku rake rinonzi, Rufu. Anoti, "Zvikuru sei, Ndakarega akadzika chiziviso kuti zvishoma 'chero asingadi kuuraya ini anondisiya nesimba.' "Anoenderera mberi achiti, "In mhuka mumuviri nyika ... pane zvose vakawandisa zvinogona kuuraya iwe, Usauraya iwe, uye ipapo kukusiya zvakati simba. "Hakugoni chete unonzwa mufaro? Zvinoita mwoyo, asi ndinofunga Hitchens zvakarurama mupfungwa. Zviri ingangodaro isu ...
Ose zvino ndipo pandichazofunga kutaura munhu anoti vanoda kuva muKristu, asi ivo vanofunga nguva chaizvo hazvina zvakanaka. Pandinovabvunza nei, ivo kundiudza zvose zvavo, vose zvikanganiso zvavo, uye zvose ndakavhiringidza zvavakanga waita kare. Handina nharo navo pamusoro zvavo, asi ndinoita vasundire shure zvekungofungira yavo. Vari kuzvitutumadza kuti chivi zvimwe disqualifies kuuya kwaKristu, apo ichokwadi chaiyo pakatarisana. Kuva mutadzi hakuiti kutitadzisa Kristu; zviri chikonzero tinofanira naYe. Kana isu kumirira kusvikira tikatarira akakwana akamumbundira tinenge tichimirira nokusingaperi. Mune mumwe chandinonamatira prices, Charles Spurgeon inotikurudzira kuti kurega kutsvaka pachedu, uye kutanga tichitarira kuna Jesu. Anoti: "The! iwe unoti, 'Handina kutendeuka zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Handitendi zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini ndiri zvakare kukodzera.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini havagoni kuziva,'Anodaro mumwe, 'Kuti ndine chimwe kururama.' Hazvina zvikuru kodzero kutaura kuti hamuna chero kururama; asi zviri zvikuru kuipa kutsvaka ...
Nzira isu sei shoko inoenderana ndiani zviri kubva. Ndikupe muenzaniso. Kana mutorwa anofamba kwandiri mumugwagwa uye oti, "Regai kwereta makiyi motokari yako chaivo nokukasika. Ndinoda kuwana mari kubva yenyu gurovhisi bhokisi,"Zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye anopenga uye kufamba kure. Asi kana mudzimai wangu akanga kuuya kwandiri vachiti zvimwechete, Ndingada kumupa makiyi pasina wechipiri kufunga. Tinoteerera uye kupindura zvakasiyana zvichienderana ari kutaura. Sei pamusoro mumwe Muchiitiko. Kana mumwe weshamwari dzangu dzakanaka vakaomerera kuti ndinofanira kuzviisa pasi pechiremera chake hwakakwana pamusoro upenyu hwangu hwose, zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye hupenzi ugoenda dzimwe shamwari itsva. Zvingava zvakanaka kuti ini kupindura kuti nzira. Asi chii kana Mwari pachake akati ichocho chinhu? 2 Timothy 3:16 anoti, "Rugwaro rwose Mwari akafemera." Ndiko kwete ndima yose, asi mashoko mashanu iwayo vanoti zvakakwana kufungisisa kwoupenyu hwose. Chokwadi chokuti mashoko Rugwaro ndiwo mashoko aMwari pachake kuchikosha. Uye ndinofunga avo ...
Air rwaJodhani vari iconic. Handina kudzipfeka zvikuru kukura zvazvo, nekuti vabereki vangu vakaramba ini kutenga ridiculously shangu zvinodhura. Handina kufara nazvo, asi ndaiziva ndaisazobvumira kuwana maoko angu pamusoro peya. Saka ndaifanira kurarama - kuburikidza nekunyepedzera havana kurarama. Rakanga refu vaviri makore kuedza pachangu vabvume kuti reebok muchinjikwa vanodzidzisa vaiva Stylish. Asi sezvo ndakura, Ndakaziva rwaJodhani vaiva nesimba kufuratira. All shamwari dzangu vaiva peya kana mbiri, uye imwe shamwari wangu kutsutsa nechido navo. Kana muchizvikudza idzva akabuda, haana chete kumisa maererano vomunharaunda Foot Locker apo akanga dzisingatengeswi nguva; Akavaka upenyu hwake kuwana kuti itsva peya. Akaita nechokwadi aiziva zvose Jodhani kusunungurwa mazuva, angadai kutenga shangu chete namavara akasiyana, uye kazhinji angadai kupedza Mugovera mangwanani misasa pamberi shangu zvitoro. It akaridza pfungwa dzangu. Ini saka pakupedzisira aifanira kuzvibvunza, "Chii saka chinokosha pamusoro shangu idzi?! Zvakajeka ndiri kurasikirwa nechimwe chinhu." shamwari yangu Kunyanya rwaJodhani akaita mashoko. Kana zvechokwadi kana kuti kwete, akanga achiti ...
Hapana anoda zita droppers. Munoziva ani ndiri kutaura pamusoro. vanhu vaya vanoda kuziva kuti vazive vanhu kuti ungangodaro uchida kuziva. Pandinofunga "namedropper,"Pane imwe Guy kuti pakarepo anouya mupfungwa. Handina chete akamuchingamidza tsama nguva, asi nguva dzose vatataura, hafu yedu kukurukura unobviswa chete nezita madonhwe nemaune. Anoziva vanoverengeka "guru nguva" vanhu vakanaka, uye ane musoro anokwanisa vanoverevedza mazita avo munzvimbo chero kukurukura. Heuno muenzaniso. ndinoti, "Aaa murume, inguvai?"Mhinduro yake: "Oh, zviri pamusoro masikati. kunondiyeuchidza iyoyo Ndairidza putt putt pamwe Michael Jackson masikati kuParis. "Shoko? chokwadi, zviri kwete zita droppers kuti irk isu zvazvo. Zvinoita vanhu pemapani vakawanda. Isu kuneta kunzwa akura varume Vanovhaira pamusoro kwavo chikoro nhabvu mazuva (inguva aenderere mberi, changamire). We kuneta shamwari dzedu ropafadzo kuti vawane nzira yakati tweet pamusoro kunzvimbo dzose zvekumwe vanoshanyira. Uye hatina mwoyo murefu zvikuru vanhu zvakadzama kwatiri ose chinhu chinodhura zvavanenge vatenga (kutoti vari rap, ehe saizvozvo). Kana zviri pakavanda kuzvikudza pamusoro ...
Ndakadzora kukwira pamwe Trayvon Martin the saga kubva pakutanga. Kufanana vazhinji venyu Ini akatarisa nhau, verenga nyaya, uye akataura nezvazvo neshamwari. It vakatonga pachena kukurukura uye kwakamutsa zvikuru vaida kukurukura munhangemutange America. The shata chaizvo rusaruraganda yakanga kusundwa pamberi zviso zvedu, uye avo vanoda kunyange kuedzesera zviri hakuwaniki dzakamanikidzwa nezvazvo. Papera gore, Trayvon kuti muurayi kwave vakaedza uye kuwana mhosva. Zvinoreva here kuti tinofanira kupfuurira kubva nyaya? Vamuwana mhosva, saka izvi "rudzi nyaya" havafaniri kuva chaiye sezvo taifunga vakanga, rudyi? Rusingabviri kuva zvakare kubva pachokwadi. Handina chinangwa kuvabvunzeiko chokwadi, Trayvon unhu, kana mutongo uyu akashungurudzwa ezvinhu, asi ndinoita kufunga mokumbokurukura kuramba. Kutongwa iri pamusoro, asi kukurukurirana haana kuva. Nei Kufarira? Ndinoziva pane vakawanda vanonetseka nei chokuita nomuedzo uyu akabatwa pfungwa dzakawanda. Vamwe vanonetseka kuti nei vamwe vatema vabereki ndivo saka anokurumidza tsitsi Trayvon Martin, pasinei nokuti akanga nyaya yake ....
Nokuti sezvo ndichiri kuyeuka, hip hwakava kupengeswa naMwari uye chitendero. Handisi kureva kuti pfungwa kuti rap ose ezvitendero vakazvipira. Asi rap shoma - kana vemifananidzo nokuda kwaizvozvo - vanogona zunzai uchida kubatanidza Mwari pane imwe nzvimbo unyanzvi hwavo. Zviri muropa uye zvakanaka kuti titaure nezvaMwari, asi mubvunzo uri, chii tiri achiti? Vamwe achati, "Rinongova mumhanzi. Regai kuzvitora zvakakomba zvakadaro!" Asi kuti rapper anoti pamusoro Akaroa zvatowedzera kupfuura ungafunga. Vamwe vakashandisa hip kuratidza kwavo nomwoyo wose zvechitendero kana kushaya ayo. ChiIslram, The Percenters Five, Chikirisitu, Agnosticism, kusatendera, uye nezvimwe zvitendero zvave akasimudzira zvose kuburikidza unyanzvi chimiro. Ndinofunga hip ari oga akakodzera kuratidza kuvimbika uye kuzvipira chero tiri wakazadzwa pamusoro. Neimwe nokuti tsika wacho chinogombedzera rawness pamwe nekuti hip rinobvumira mamwe mashoko, Saka unogona chaizvoizvo "kudzidzisa." Asi vakawanda nguva hip yakafanana zvikuru bhabhashopu pane boka Sunday School. Rap kusina dzapwa pamuromo, kana vanoziva zvavari kutaura pamusoro pazvo kana kwete. Kutendeseka Vs. Kusangwarira ...
Kwekutanga gore rino ndakaenda pamusoro rwavakaita pamwe mubhuku rangu idzva, The Life Good. mumwe usiku, Ndakapa hurukuro kuti akaedza kupindura mubvunzo, "Zvinorevei kurarama upenyu hwakanaka?" muChattanooga, TN, isu akanyora shoko uye ndava vaiswa payo. Bhuku rakabudiswa musi October 1, 2012 uye iwe unogona kutenga nayo pano. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro bhuku unogona tinya pano. Unogona kutenga The Good Life Album pano. Uri kurarama upenyu hwakanaka?
Vakawanda munoziva ini somunhu rapper uye muiti, asi chokwadi chiri, mwoyo Ndagara muparidzi. Nokuti chero Ndave kuita mumhanzi, gobvu chido changu chave kuzivisa Vhangeri uye kuzivisa kunaka uye kubwinya kwaJesu Kristu. Nenyasha dzaMwari randaifanira mukana kushandisa mimhanzi kuita kuti paruzhinji padariro. Ndava akada ose yechipiri uye Ndakaedza kuzviita neunyanzvi. Kwemakore, Ndava vaiona Mwari kunditi yokusimbisa ini kwete kuti mumhanzi, asiwo kuparidza uye kunyora. Ndicho chikonzero gore rapera ndakanyora The Life Good, bhuku dives udzamu mashoko shure nhoroondo yangu zita rokuremekedza iroro. Zviri Ndokusaka ndakazvizivisa wokupedzisira kuwa kuti ndingadai rirege vaifamba zvikuru sezvo zvikuru sezvo ndave. Ndinoda kudzidza kuva mufundisi akatendeka, uye kuti zvinogona chete zvechokwadi panotaurwa chechi yeko. Saka ndiri kutora nguva kushandisa pakudzidza kubva vafundisi okuzvipira vekusvondo vangu Washington, DC. Ishe vachitendera, sezvo ini kushumira patsvimbo kuchechi, Ini Uchakwanisawo kuti ...
Heinoi ekuteerera kubva mharidzo ichangopfuura Ndaiparidza Pisarema 142. Tose nepa dzakaoma, asi pisarema inotiratidza kuti kunyange yakaipisisa munguva tingawana zvose zvatinoda muna Mwari. Mana pfungwa dziri: ini. Mwari ndiye Shamwari yedu Mumatambudziko II. Mwari ndiye Kudzivirirwa wedu Mumatambudziko III. Mwari ndiye Pfuma wedu Mumatambudziko IV. Mwari ndiye Mununuri wedu Mumatambudziko
In kupemberera kwebhuku bhuku rangu, The Life Good, pano Ndiyo official video kuti "One gumi," kubva Newest Album wangu, anonziwo The Life Good.
Mundoona shure paanoitwa pamwe Trip Lee sezvaakaita inokurukura ichava nenguva yakanaka neyakaoma vari mubishi rokuita Album ake okupedzisira "The Life Good."
Ndakatarisa dzakawanda enyika magungano okupedzisira mavhiki maviri aya. Mukurukuri paruzhinji mandiri asingagoni kubatsira asi pamusoro-kuongorora mashoko uye unyanzvi kwakarungwa kwounyanzvi pakati musarudzo nevatsigiri vavo. munhu wese ari ichocho akaedza kunyengetedza kwauri pachako nyaya uye / kana zvipikirwa mikuru. Ndichaenda bvuma, zvimwe zvishuwo zvavo vaiva vanokudzwa, asi vakawanda mashoko vainzwa akaverenga, chinhu, uye dzavasinei enyika- kwandiri kanenge. Vamwe ZVOKUTAURIRANA akanga Achinanga zvakaipa zvakare. Asi kukakavadzana platforms haisi pfungwa this post. Chimwe chezvinhu Ndakaziva chaiva kuti apo mapato vakanga vachiedza kutengesa imi rwevamiriri vavo, vakanga vachiedza kutengesa imi worldviews dzavo. Maererano navo, zvinhu propserity ndiyo nyika yechipikirwa, uye nebato ravo anoda kuva Mosesi wako. Mukuona kwavo, upenyu hwakanaka ari kuwana pfuma kana ukashanda nesimba, uye musarudzo dzavo ndiye Muponesi anogona kutora imi ikoko. Zvino hapana chivi pamusoro upfumi. Uye vari mubayiro basa nesimba chinhu chakanaka, asi kuti hazvigoni kuva apo tariro yedu nhema. Upfumi hakufaniri kuguma kwedu chinangwa, zvinofanira kuva nzira kuti magumo mukuru. Isuwo havagoni mari ...
Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive: ini. Chivi chinokurwadzai Hasha dzaMwari II. Chivi chiri Alernate Path III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri
Rwendo Lee riri "Beautiful Life" kubva Achida Mwari pamusoro Vimeo. rwiyo wandakatanga akanyora kwangu Album zvikuru ichangopfuura, "The Life Good" aiva rwiyo inonzi "Upenyu Hwakanaka." Vachishuva Mwari akandibvunza pamusoro kuti rwiyo wangu mwoyo shure payo. Heunoi yavo yose Blog romukova. Uye pano ndiwo acho kuti rwiyo, iyo ine V. Rose: haka: Beautiful Life Inside Living Kufambira Kufema Saka Regai Hope Simukai Mwari aiziva zvaakanga achiita Apo Akapa Beautiful Beautiful Life Verse 1: hanzvadzi Dear, Ndinonzwa nzvimbo nenguva ndinoziva hazvisi chinhu nyore Kumbonetswa achipfuura kuti Pane mwana mudumbu mako, asi iwe hauna kuedza kuita Ungada kuti tora zvose shure kana waiziva kuti, asi iwe hauna kuva chavanomboziva kuti kuti nguva nemukomana wako, kuti kunonoka usiku Kana wafunga akanga achiita rudo, kuti iwe aizoita upenyu Zvino zviri kunzwa tsvete, murume haina kufanana Hauna upenyu, fura, nguva chaizvo haisi kodzero Havagoni chaizvo kukuudzai kuti ndinonzwisisa marwadzo enyu Asi ndinoziva haufaniri kunzwa mwoyo uye kunyara Uye ndinoziva kuti mwana ari mudumbu haasi mutambo Ane ...
Munhu ane Mwari pfuma yake ane zvinhu zvose muna One. munhuwo pfuma zhinji anogona wakamurambira, kana iye kubvumirwa navo, ari kufadzwa achanyorwa saizvozvo hasha kuti havana kuva zvakakodzera kuti mufaro wake achava. Kana anofanira kuona vaende, mumwe pashure chete, iye achaita Kashoma vanonzwa kurasikirwa, nokuti Tsime zvose zvaanazvo muna One zvose kugutsikana, zvose zvinondifadza, zvose mufaro. Chero iye ingatadza iye chaizvoizvo akarasika hapana, nokuti ikozvino ane zvose One, uye ane naro dzavasinei, pemurairo uye nokusingaperi. A.W. Tozer, Kutsvaka Mwari
Biblical MURUME CHAIYE uye Kukosha Vanoyemurika kubva Kuchiva Mwari pamusoro Vimeo. Shamwari dzangu pana vachishuva Mwari Akandibvunza mimwe mibvunzo pamusoro zvipingamupinyi kuva murume uye sei kugadzirisa dambudziko. Pano zvandakataura
sei Romans 8 Anobatsira Trip Lee kubva Kuchiva Mwari pamusoro Vimeo. Shamwari dzangu pana vachishuva Mwari yakandikumbira kugoverana pamusoro ndima yoRugwaro anondibatsira kwazvo. In clips ichi Ini kufunga VaRoma chitsauko 8
Sezvo vazhinji munoziva, Ndave ndichishanda pane bhuku kuenda pamwe Newest Album wangu, The Life Good. Eya bhuku rino vachange kwokusunungura pamwe Moody Vaparidzi musi October 1, 2012. Verenga zvakawanda nezvazvo pachaunga kusunungurwa pazasi. Uye kuenda TheGoodLifeTheBook.com kuti akaziviswa kana anobudiswa. Hip Hop Artist rwendo LEE kusunungura DEBUT BHUKU UPENYU AKANAKA ON OCTOBER 1, 2012 KUBURIKIDZA Moody VAPARIDZI Upcoming chirongwa achivaka kuitika Album kusunungurwa uye redefines "The Good Upenyu" by kudenha vanhu muchiedza nhema vasingachagari asi watangawo itsva uye munokubwinya. Los Angeles, Calif. (Chivabvu 17, 2012) -Billboard Chati-topping hip Artist Trip Lee ari gearing nokuda kwake debut bhuku kusunungurwa, The Life Good (Moody Yevaparidzi). A kuenderera kuti Album ake okupedzisira izvo musi April 10, 2012 kuburikidza Reach Records, The Good Upenyu achava depends zvitoro munyika musi October 1, 2012. "Kwemakore, Ndave kuita mimhanzi nezvimhingaidzo yedu nyika maonero uye pfungwa kuna Kristu - asi kune vagara zvisingakwaniswi mimhanzi, nekuti hakuna chete zvokuti unogona kutaura pane rwiyo,"Anodaro Trip. "The Album akapa vateereri Snapshots upenyu hwakanaka, uye bhuku vachatitaka ...
Ava Lyrics kubva rwiyo rwangu iLove pamusoro album yangu itsva "The Good Life." Mumwe munhu kutambura iLove? ndima 1: zita Musikana wangu Runotanga Ini Rinopenya chinopenya senyeredzi dzedenga dzezvitsigiro parutivi rwangu, apo kwayo rima ari chiedza Iye befriends zhinji, uye isu kurasika pameso ake nokudhiraivha wakamutarisisa pane kuona nhanho dzedu Mhanyai kwaari apo isu Wake pasina takwira mweya yedu Mudzimai ari addicting, chokwadi: tiri fiends Asi isu haasi Kufemba guruu, isu uchingotaura glued kuti sefa Iye anotonga isu, ona uchapupu apo iye zvindori pamwe Tinoda kutora vaviri naye pamusoro mbiri vanhu nehanzvadzi Her? Vamwe vakakura vamwe duku We sync vake in zuva kuramba naye kuitira Isu kundomutora apo iye anodzika kunyange kana tisingakwanisi mari yake Kumbira kwandiri kana ini chaizvoizvo kwaari? Ini kufanana, "kunge" Asi kana ari kumashopu ndaifanira kudare naye ndakaona naye Ndinoramba kwake zvishongedzo, Ya mukomana regai vanoipamba Ndinoda naye muupenyu hwangu, Ndaizviita chinhu nokuda kwake Kanganwa pamusoro Dime mukomana, iye zvakawanda sezvinoita muzvina Ndiri naye nguva dzose,...
My chechina Solo Album, "Upenyu The Good" ave pamutemo yabudiswa! Tenga album kubva iTunes pano. Unogona kunhonga album kumusoro muzvitoro pana Lifeway, Christian Family, Mardel, uye Target & Wal-Mart (sarudzai zvitoro). wo, unogona vhidhiyo inonzi hutsva "Ndiri Good" uine Lecrae pano. Isu partnered pamwe Voice rezvapupu pane uyu kurera ruzivo pamusoro kutambudzwa uye kukurudzira vatendi kumira takasimba. ini utaurewo achinyengetera kuti dai Ishe kushandisa chirongwa ichi kupikisa uye kukurudzira vakawanda!
Zvinoitika kuyeuka zuva mumwe afa. Munhu warasikirwa nomunhu wavanoda anoziva kuti iwe handimbofa zuva Vakapfuudza. Zviri kuguma upenyu, uye dzinosiririsa. Ehe saizvozvo, sezvo dzinza revanhu, hatidi chete kurangarira vadiwa. Apo zvinokosha voruzhinji kufa, tinoyeuka mucheme zuva vabatwa nesu pamwe. rudzi rwedu anoyeuka zuva Martin Luther King Jr. akapfurwa, uye zuva John F Kennedy akaurayiwa. Asi mazuva iwayo kunyanya hazvitombokohwewi vachinzi zvakanaka. Vaya vaiva zvinotyisa mazuva, apo vanhu vanodiwa vakapondwa ne akaipa vavaurayi. asi, zviuru zviviri apfuura Jesu weNazareta akapondwa yake ruvengo vavaurayi, uye tinorangarira kuti zuva se "Good" Chishanu. Chii saka zvakanaka pamusoro zuva apo vakawanda vakataura pamusoro murume munhoroondo yevanhu akarohwa nechisimba uye vakaurayiwa nevavengi vake? Chokwadi chokuti vanhu vakaipa achida vanofungireiko kuuraya Mwanakomana waMwari ndiye dzakaipisisa uye hapana mubvunzo chivi chikuru nokusingaperi vakaita. Asi rufu rwake rakasiyana nemamwe rufu asati kana shure kwaro . Tinogona kudana kuti zuva "Good" Friday vazhinji zvikonzero. He ...
"Ndonzwa mushe" akanga imwe okupedzisira nziyo kunyorwa nokuda Album yangu itsva, The Life Good. Lecrae uye ini chaizvoizvo akanyora uye akanyora rwiyo yakasiyana zvachose, uye isu vakaifarira pakutanga. Asi pakupedzisira takasarudza zvakanga chete tsvarakadenga yakanaka; uye taida ariswededze chinhu chikuru. Saka Ndairidza munhu anorova mashoma kwaari kuti ndakanga ndisina mashoko akanyorwa nokuda asi, uye tose takanga murudo pamwe iyeyu. Zvaiva paakaita, va neukasha, uye catchy. Ndakamuudza kuti ndaida kunyora rumbo kuti akakurukura kuchengeteka kwedu muna Kristu. Ndaida kukurudzira vaKristu kuti varege kurarama nekutya uye kutanga vaigara Romans 8. Takasarudza pamusoro "Ndiri Good" dingindira, takabvunza Ishe rubatsiro, uye takatanga achinyora wakatarisana makona Inosvika kwakaita Atlanta Studio. Isu akanyora dzakawanda vocals dzedu kuti usiku, uye kana hwose zvaitwa Taikada. Tinovimba tsananguro iyi acho kuchatibatsira kugaya zvirimo ... Verse 1: Ndinonzwa kuuya dambudziko kuti ini, rufu pasuo rangu nzira / Kutya anoti I'ma kuparara BRO, asi hazvisi izvo Ishe wangu vanoti / Akati Ini haisi mhosva kunyange ...
Register nokuti Man Up Conference pano uye kudzidza zvakawanda pamusoro Album wangu “The Life Good" pano
Munhu wose anoda kudiwa. Tingava vanobvuma kana kwete, tose tine ichi chido kunzwa paakasvika uye vanoongwa nevamwe. Vakawanda vedu vanopedza hwedu hwose upenyu kutsvaka mumwe munhu kuti vanotida, achitarisira kuti mumwe- munhu- achagutsa madanha ichi mukati. Zvakanaka kana uri kuronga kuti kurasikirwa pachako dzorudo nhasi uye muri kutarisira kuti uchaita pakupedzisira vanogutsa chido ichocho, Ndinoda kuti muzive kuti chinangwa chako chakanyanya kuderera. hamungambovi kuwana rudo kupfuura vose pane mwenje chiedza chisvusvuro manheru ano. zvisinei, pane simba rose, zvose zvinogutsa, rudo rwakakwana yauinayo. Pane Mwari anokuda kupfuura zvaungarasikirwa kufungidzira. Rudo rwake hakuchinji pane dzimwe nguva uye haufaniri kuita Woo naye kana kuzvishandira. Mwari Anotida? Ndinoziva dzimwe nguva zhinji vedu kushamisika kana kwete Mwari anoda chaizvo kwatiri. Iye sokuti saka kure kure. Uye pamwe taizorega kukahadzika kana akaita chimwe chinhu kuti kujekesa kwatiri. Chokwadi kwatiri, He anotova. The Bible rinoti, "Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira." Uye zvakare unoti,...
"robhoti" ndiye rwiyo wangu kuuya Album yokutanga "Upenyu The Good" kusunungura April 10. Lyrics kuti rwiyo uye akasununguka Download havasi pasi ndiri robhoti renyu, Ini handisi aud Hamusi puppeteer rangu uye ini handisi drone the mano Got tenzi itsva uye ini kumutevera ndoga ndinoda upenyu hwakanaka kusvikira ndiri aenda Verse 1: Hey Ndakaberekwa isingasviki munhu Ndinoziva zvinoita sebenzi Ini ndakaberekwa zvechokwadi robhoti sorusvava No upenyu chaihwo mandiri, Ini chete abata basa rangu No nokuzvidzora, Ini chete akaita ndakazoudzwa ndine hurongwa wangu wokutanga, Ndakanga chete zuva yekare Asi handina mukana, kukonzera mwoyo wangu wakanga nzira chando mwoyo wangu akatora hurongwa, Ini ndisingagoni kuputsa chacho Sold muuranda uye handina kukwanisa kutora masimba Saka ndakanga chete chilling muna robhoti yangu hembe With robhoti dzangu neshamwari, uye robhoti wangu runoyerera Living robhoti nzira, kukonzera kuti zvose ndinoziva Kusvikira ndakanzwa ndaigona kusunungurwa kubva kwangu robhoti mweya, Ndiri kufanana ... Hook Sei iwe nguva dzose kuedza ini kudzora? Hamusi wangu webasa kuti ...
"The Life Good" anodzika April 10. tora “robhoti" vakasununguka pano
Nokuti yokutanga hafu 2011, Ini haana nziyo, hapana zvinhu, hapana anoratidza, hapana chinhu. Ndakatamira Washington DC akatora pamusoro 5 mwedzi kure nokuda internship choufundisi. Kunyange zvazvo ndakanga ndisina aifamba nyika uye akamira pamberi gungwa vanhu ose usiku, zvakanga mumwe mwaka hwangu zvibereko zvikuru. Kana internship dzakaguma Ndakatanga kufamba zvakare uye zvishoma nezvishoma ndakatanga kushanda pamimhanzi itsva. Around achawira Ini ndokupfura kupinda zvizere giya kushanda wangu rechina Solo Album. Uye pashure pemwedzi kushanda zvakaoma, album kwaitwa akanyatsorevesa. Ini handigoni kunyange kutaura kufara ndiri kusunungura naro. Ndinogara kutarisa kupa vanhu chinhu handina kupiwa pamberi. Ini handidi remake ane Album ndakatoiverenga akaita. Ndinoda kukupa Album mutsva, nenziyo itsva, uye nzira itsva kupemberera chokwadi mamwechete. mu 2006 pamusoro wangu Album rokutanga, Kana ivo Only Waiziva, Ndaida kuudza vanhu nezvaMwari ane mbiri ani Ndaida kuti vazive. mu 2008, "20/20" akabuda ndaida kukurudzira vanhu kuti vaone Ishe chiono chaiko. 2 Papera makore, "Pakati ...
Heunoi MLK noushingi utungamiri vanoonekwa (tisingatauri zvimwe kunyora yakanakisisa Ndakaverenga ndamboverenga). Iye anoramba vachigamuchira mitemo isina kururama uye anoramba kumirira. Iye parura vachimiririra rose rudzi vanhu. Sezvo munhu mutema, Ndiri chaizvo kuna Mwari nokuda basa nokuzadzikiswa kuburikidza naye. Uye sezvo muKristu, Ndinoda kurwira kururamisira sezvinoita zvakaoma sezvaAkaita, tichiyeuka kuti Jesu chete anogona kuunza kururamisira kwakakwana. Uye Achazviita. Ndiro Mashoko aya atorwa tsamba MLK wakakurumbira. Unofanira kuverenga yose chinhu paunosvika mukana. "Isu ndakamirira kupfuura 340 makore reConstitutional uye Mwari akapa kodzero dzedu. Marudzi Asia uye Africa vari kutamira pamwe jetlike nokukurumidza vawane rusununguko mune zvematongerwo enyika, asi tichiri vanoverevedza panguva bhiza uye ngoro tifambirane vawane kofi pane zvokudya pakaunda. Zvichida zviri nyore kune avo vasina vakanzwa anopedza miseve yose segregation kutaura, "Mirai." Asi kana waiona noutsinye dzakatsamwa Lynch vanaamai enyu uye madzibaba panguva kuda uye achinyudza nehanzvadzi dzako uye hama chero zvaidiwa; kana wakamboona ruvengo izere mapurisa vanotuka,...
Nhasi isu vanopemberera nhaka kowokutanga mutungamiriri Civil Rights sangano, Dr. Martin Luther King Jr. Ishe akashandisa murume uyu kuti afuridzire rudzi, uye kufamba vanhu vakananga wakanyatsojeka. Pachine basa kuitwa, asi mupiro wake harwutsananguriki. No gamba akakwana, uye Dr. King ndozvakaitikawo, asi Ndinoyemura naye munzira dzakawanda uye ndiri kunofuridzirwa nhaka yake. Heano zvinhu zvitatu pamusoro hwake zvinokurudzira ini. 1. Passion nokuti Justice Dr. King kusemeswa nokusaruramisira yakanga kwakazara munyika yedu, uye akatsaurira upenyu hwake kuna kurirwisa. MuBhaibheri, akaona chiratidzo chaMwari nokuda kwenyika yake, Akaona vaporofita vanodana kuti mugumo kudzvinyirira, uye iye waiva wakazadzwa kuona kuti kururamisira chikaitika. Ndinoyemura chido ichi kururamisira, munyengetere Mwari aizoramba vakaicheka mumwoyo mangu. Ndinoda atsigire vakadzvinyirirwa uye kuparidza Good News kuti tariro. 2. Leadership Pasinei youthfulness ake, Dr. King ouprofita kutaura uye nekristaro zvakaratidzwa pachena kwakaita kubuda sezvo mutungamiri sangano. Haana kugara shure uye kugunun'una, iye akawedzera uye ...
Vanechitsama masvondo apfuura, Ndakataura panguva pazvivako Outreach National Conference pamusoro mutendi wose basa kundoparidza. chinyorwa My yakanga 2 Corinthians 5:18-21. Heinoi vhidhiyo kubva pachirongwa. One Life | Share It - Trip Lee kubva kembasi Outreach musi Vimeo. Kana uchida, heunoi vhidhiyo kukurukura Panel Ndaiva chikamu uyewo. Kukurukurirana rakanga nezveushumiri kembasi, chechi yeko, Kutumwa Kukuru, etc.: Vafundisi Panel kubva kembasi Outreach musi Vimeo. Plus, Ini vanokurudzira iwe tarisa vamwe vezvenhau vose kubva musangano. Paiva matani dzidziso huru kuti ndinofunga uchawana kuti musimbiswe.
Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviri pachena muMagwaro kuti upenyu husingaperi akupa vaya vanovimba Mwari uye kutenda Good Yake News, uye kwakarurama rinoitwa pasi vaya vanoramba naye. Asi pane zvinopfuura imwe nzira kuramba Mwari. Heano vatatu kuti ndakawana muTestamende Itsva. 1. Vachiramba kuti Jesu ndiani Akati Akanga "Ndianiko murevi wenhema asi iye anoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Kuti ndiye munhu anopesana naKristu, anoramba Baba noMwanakomana. Hakuna munhu anoramba Mwanakomana angava naBaba. Ani naani anopupura Mwanakomana una Babawo." 1 John 2:22-23 Kune vanhu vazhinji munyika yedu nhasi vanoda vanofunga zvomudzimu kana chitendero vanhu. Vanodavira kuti Mwari ariko, uye vanoedza kumunamata munzira yavo pachavo. Pamwe ivo kunyange kumuona somudzidzisi chikuru kana muporofita naMwari. Asi kana havatendi kuti Jesu ndiye Akati Ndiye, vari paakamuramba. Achiona Jesu anongoronga chikuru ...
kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezve muedzo kwaJesu uye sei Akapindura. Heinoi ekuteerera kubva pfupi mharidzo Ndaiparidza nezvemuvaravara kuti chechi yangu mwedzi mishoma shure. Ndaida kutarisa muedzo kwaJesu, fungisisa kuteerera kwake, uye funga kuti chii chatingadzidza pane chiitiko ichi. Ndezvipi zvinhu zvatinofanira kuyeuka munguva dzokuedzwa? Hedzinoi pfungwa huru: ini. Mwari Inokutendera uye Anoshandisa Muedzo Senzira Plan Rake II. Kuneta hakusi Zvikodzere kuti nemuedzo III. Muedzi watopiwa akakundwa Kuedzwa kwaJesu BragOnMyLord ndinonyengetera kuti kukurudzira kwamuri
Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti ave tsotsi panzvimbo yedu, uye kuti abatwe somutadzi, kwete nokuda kwake mhosva, asi kune avo vamwe, sezvo akanga akachena uye ndisaendeswa ose mhosva, uye kuti kutsungirira chirango zvakafanira kwatiri- kwete iye. Zviri saizvozvo, zvirokwazvo, kuti tava vatsvene maari- kwete nekuda basa redu kugutsikana kuti kururamisira kwaMwari nokuda kwemabasa edu, asi nekuti tiri vatongwe maererano nokururama kwaKristu, zvatakakutadzirai akafuka nokutenda, kuti ave zvedu. John Calvin Verenga uyu zvishoma nezvishoma uye ngaiparadzanise kunyura muzvinhu! Ndakabva mhiri mazwi ichi paunenge uchigadzirira mashoko angu pamusoro 2 Corinthians 5:18-21 nokuti pazvivako Outreach National Conference. Zvinhu zvakanaka
I uzvitore, ipapo, kuti kusatenda muna Jesu (NOT muna Jesu) ndiko ufuratire Jesu vatsvake kugutsikana mune zvimwe zvinhu. Uye vanodavira muna Jesu ari kuuya kuna Jesu nokuda waguta zvatinoda uye zvedu zvishuvo. Kutenda hakusi kunyanya sungano chokwadi mumusoro; zviri sezororo kudya mumwoyo iyo fastens musi Jesu kugutsikana. [Jesu anoti,] 'Anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota!'John Piper
About mwedzi apfuura ndakanyora Blog kutaurira vabereki nei ndakaroorana muduku. Ndakabayiwa mwoyo akakurudzirwa nokuda mhinduro kubva zvose vanoriverenga uye munyengetero wangu kwave kuti dai Jehovha kutibatsira kufunga rutsigiro nezvomuchato. Kana hamuna kuwana kuverenga kuti yepakutanga romukova tarisa nazvo pano: Nei ini Nemba Naizvozvo Young? Zvakanaka pashure vazhinji saka vabereki ruoko kwandiri uye akandiudza kuti anobatsira zvakanga kwavari, Ndakafunga kuti zvaizova sezvaakanga zvinobatsira kuti mukadzi wangu, Jessica, tipindure mubvunzo iwoyo pamaonero ake. Saka pano ndiwo. Chii chakaita mudzimai wangu kusarudza kuroora saka muduku? Anoti… 1. Ndakawana murume aitya Mwari Pandakatanga vakasangana Trip, Handina kuronga kuroorwa chero nguva pfupi. Asi kubva pakutanga chaipo nguva isu vakabuda, Ndakaziva paiva chinhu chakasiyana nezvake. Iye waiva wakazadzwa nezveEvhangeri nenzira yandakanga ndisati ndamboona pane mukomana wezera rangu. Neniwo kumboonana mumwe akachenjera kudaro maonero kufambidzana. Pamusana mudzidzi wake asati kukoreji aiziva chaizvo akafunga ...
Pano vamwe vhidhiyo kubva mharidzo ndakaparidza kutanga kwegore rino muSan Diego. Musoro musangano akanga "nepaanogona", saka ndakasarudza kuparidza pamusoro Romans 12:1-2. Chii chinombodiwa kutarisa zvakaita kuti mutendi ave "akadzingwa?" My huru dzaiva kuti mutendi vanofanira ... 1. Uchadzingwa By Mercy 2. Uchadzingwa Kunamata 3. Kushandurwa Tariro yacho inobatsira!
Ndinoda mazvita kuna vose vakanyengetera kwatiri apo takanga rwavakaita vari kondinendi guru Africa. Ishe nenyasha akapindura vazhinji minyengetero ivavo, uye vaishandisa iwe pamwe nesu kuita matambudziko munyika nhanhatu dzakasiyana. Zviratidzwa rava ikozvino kuguma uye isu kuenda kumba manheru. Taizorega kunzwisisa minyengetero yako mberi njodzi kufamba uye utano. Vashomanana vedu havana kunzwa zvakare zvakanaka uye tinoda kuti musha utano. Ndinotarisira vaiswe Blog kukuudzai zvose rwendo rwedu. Kusvikira ipapo isu tinokoshesa minyengetero yako
Right vodaro 12:34 ndiri Botswana. Ndicho redu rokutanga zvizere zuva Africa uye Ishe chava kutoshanda. The Reach wose vashandi yacho mu Johannesburg usiku hwapfuura uye nendege Botswana uyu mangwanani. Takasvika kusangana matani vatsigiri masikati ichi pane imwe kusaina zvatakamuitira pane muKristu chemabhuku omunharaunda uye takava vamwe kubvunzurudzwa makuru. Mangwana manheru ndiye konzati pamusoro revashanyi wokutanga uye isu tiri amped. zvechokwadi Tinoda rwavakaita uyu berekai uye tingada kuda rubatsiro rwako. Sei Ungabatsira? Unofanira kutibatsira nokunyengetera, isu zvokuti vazhinji achakuvongai nokuda kwedu kuti chikomborero akapiwa kuburikidza neminyengetero zhinji. 2 Corinthians 1:11 Tinonyatsobvuma kuti Ishe anoshandisa minyengetero yevanhu vake kuti aite zvirongwa zvake. Saka unogona kutibatsira nokunyengetera. Hedzinoi dzimwe nzira dzinokosha unogona mutinyengetererewo uye nesu: 1. Kuti Ishe tirambe utano uye vakasimba 2. Kuti tingada mamiriro isu savaranda 3. Kuti Concerts kuenda zvakanaka 4. Kuti Ishe kudzivirira mhuri dzedu apo isu tiri kure 5. Kuti Kristu aizova ...
September uyu isu yakabudiswa pfupi firimu uye Album inonzi “Man Up" kupikisa majaya kuti vanhu. Pano vhidhiyo mumhanzi nokuda “Man Up Anthem." Unogona kutenga pfupi firimu uye Album pano
Heinoi ekuteerera kubva chirongwa ndakadzidzisa kwokutanga gore rino pamusoro pekuparidza akatendeka. The Evangelist Faithful nokuda BragOnMyLord Nokuti avo pfupi iri nguva, pano pfupiso pfungwa: 5 Zvinoitwa Evangelist Faithful ... 1. Kunosanganisira uye Anonzwisisa Vhangeri 2. Nechivimbo uye Unashamed of Gospel 3. Anoda Lost 4. Zvinobva Mwari nokuda Results 5. Anonyengeterera nokuti Lost uye Mikana netariro kuti zvinobatsira
Nokuti vaya ndamboona vhidhiyo rwiyo rangu "The Invasion (gamba)" pano riri. Nakidzwa! Ndinovimba kunokubatsira kuramba maziso ako pamusoro Kristu.
Nezuro ndakaita kunonoka usiku vanorega pachitoro kubata zvinhu zvishoma uye ndaiva kunakidza chaizvo kukurukura pamwe keshiya. Takaita hurukuro diki sezvo iye tarisa vangu zvinhu, uye ipapo iye kundipa dhisikaundi kadhi asi Ndakamuudza mudzimai wangu akanga atova munhu. Ndipo apo nhaurirano paakasvika mafaro. Ndinoziva nhaurirano iyi anonyatsoziva nokuti wandakamboda kakawanda asati. Zvazvinoita chinhu seizvi ... Person: chii!? Uri kuroorwa? ini: Hongu Ndave ndakaroorwa maviri nehafu zvinoshamisa makore. munhu: Une makore mangani? Iwe tarisa sezvinoita mwana. ini: Ndiri makumi matatu. munhu: Muri saka muduku! Nei munyika waizoita kuti? ini: Sei wakaramba I? mu 2009, Ndakaroorana panguva padikidiki pamutemo uye ndaisambogona vanoremekedzwa zera makore makumi maviri nerimwe chete. Panguva yokudanana wangu, kupana nduma, uye pfupi muchato, Ndanga akabvunza nguva nenguva zvakare mibvunzo yakaita, "Sei kuzoroorwa muduku? Chii nhokwe?", uye munhu kufarira kwangu, "Unofanira kunge vakamirira uye vakanakidzwa hwako!" Vamwe vabereki kubvunza mibvunzo iyi vaiva vatorwa, asi vamwe vaiva mhuri. Kwaiva Ini sebenzi kuzoroorwa panguva yakadai "muduku" zera?...
Ose zvino ndoenda shure uye kuteerera Albums uye nziyo yaifamba chaizvo ini artistically uye mumudzimu ndikanzwa apo navo. Mumwe wevaya Albums ndiyo The Solus Christus Project kubudikidza Shai Linne. Ndicho chimwe chandinonamatira hip Albums- nguva. Kurimwa akasiyana (kunyange asina commerical), zvirimo Zvinoshamisa, uye Shai kuti lyrical unyanzvi ari zvizere kuratidzwa. Uyu ndiwo mumwe wevaya Albums chinoita rap vazvibvunze, "Sei zvakadaro Ndiri rapping zvakare?" Ini handigoni kudzokorora chinyorwa rose this post, asi pano mumwe chandinonamatira mavhesi album. Ndiyo ndima shai kubva "Mic Check 1,2": Akapa upenyu hwake sorudzikinuro, Ndiri hype uye ndiri kutamba Kana kudetemba nziyo dzokurumbidza angu kwaKristu, Vakarurama Gwayana ichivhenekera Lantern wangu Ndiani mumwe kunze Ishe marudzi Inogona hype muhedheni chidhakwa kunyora pasina kunyange neshoko rimwe kuzvidzora kukudzwa? My simba Mashoko- kukwana zvechokwadi kutsanangura tsvinda Mbeu Destined kuita zvishamiso namabasa nemakore gumi, akanga yekare misoro vakashamiswa kunzwisisa kwake Kuteerera vabereki vake, kunyange zvazvo iye akasika zvikwepa zvavo mhepo A Anomaly wechokwadi- uye ndiani anogona kufungisisa Mushumiri ...
Excellent pambiru kubva Trevin Wax. zvose zvatingadzidza ichi nyasha, zvebhaibheri, netsitsi kusvika http:://bit.ly/oWNTno
Vanechitsama week ago I akabvisa kubva okurerutsa ndokunanga kune rumwe rutivi rwepasi nevamwe vangu kufarira vanhu. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, yedu Steadman rwokuparidza maneja, ini vakananga Australia kushumira Jesu. Zvatakaita Takapedza vhiki mbiri pasi pasi achipfuura Brisbane, Melbourne, Perth, uye Sydney. In chimwe nechimwe mumaguta takanga chikamu chikuru Concerts kubvira 5,000-10,000 Vechidiki. Pamberi Concerts, takaenda zvimwe zvikoro uye akakoka navo kunze anoratidza. Chii takabvumidzwa kutaura panguva zhinji pazvikoro aihuitira (nekuti vakanga zvikoro dzisiri dzechiKristu mamiriro), asi isu zvataigona kukurudzira vadzidzi uye kuvaratidza Kristu. Panguva Concerts, zvose vashanu isu akadonhera dariro somunhu Rowdy, unashamed vashandi. Isu yakazununguka nzendo iwayo kusvikira panogumira mano edu apo kuedza kuva akajeka sezvinobvira nezveEvhangeri kunotikurudzira kuita zvatinoita. Kupfuura chero isu taida vabereki kuziva Jesu! Tinogara kuedza nechokwadi vabereki kusiya mwoyo, kwete dzedu unyanzvi, asi Ishe wedu. Chii dzatakaitirwa Takasvika ...
Recent Gospel Coalition video of Eric Mason, Lecrae, uye ini kukurukura dema vabereki uye “kudzorwa" zvouMwari